Universal Online TV | किन छोडे प्रचण्डले लाजिम्पाट ? यस्तो रहेछ कारण किन छोडे प्रचण्डले लाजिम्पाट ? यस्तो रहेछ कारण
किन छोडे प्रचण्डले लाजिम्पाट ? यस्तो रहेछ कारण
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लाजिम्पाटमा रहेको आवास छाडेका छन् । उनी ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ खुमलटारमा बसाइँ सरेका छन् ।